Hàlatàhaka Manàla Baràka Mahavoarohirohy Ny Minisitry Ny Siansa Sy Ny Fanabeazana, Miteraka Savorovoro Ao Kroasia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2017 8:45 GMT
Ny minisitry ny Siansa sy ny Fanabeazana ao Krosia, Pavo Barišić (eto anoloana) miaraka amin'ny priaminisitra, Andrej Plenković etsy aoriany. Sary avy amin'ny tranonkalan'ny Governemantan'ny Repoblikan'i Kroasia izay mamela azy ho azo averina ampiasaina miaraka amin'ny fitanisàna ny nakàna azy.
Noho ny amin'ireo mpiasam-panjakana Kroaty mihambo aminà diplaoma akademika tsy sahaza azy, azony tamin'ny fakàna tàhaka, leo ny olompirenena Kroaty.
Tamin'ny Janoary, nanao famintinana ny Kaomity notendren'ny Parlemanta ho an'ny Etika amin'ny Siansa sy ny Fampianarana Ambony ao Kroasia (CESHE) fa ny Minisitry ny Siansa sy ny Fanabeazana amin'izao fotoana izao, Pavo Barišić, dia nàka tàhaka ny asan'ny manampahaizana izay hafa nefa tsy nilaza ny loharanony tao anatin'ny antontan-taratasy akademikany tamin'ny 2011.
Barišić nanamafy fa resaka hadisoana kely tamin'ny soratra fametraka ery ambanin'ny pejy ilay izy, izay efa voahitsy ho an'ireo fandikàna ho amin'ny teny Espaniola sy Alemàna, hatramin'ny dika ety anaty aterineto ho an'ny gazety Kroaty.
Ankoatr'ireo maro hafa, ilay biolojista momba ny sela, malaza erantany, Ivan Đikić, nangataka tamin'ny Praiminisitra Kroaty, Andrej Plenković mba hanolo ilay minisitra izay “nandiso fanantenana ny praiminisitra sy ny vahoaka tamin'ny filazàna fa resaka hadisoana tamin'ny fanontàna fotsiny io”. Navoakan'i Đikić ny fanadihadiana lalina iray, miaraka amin'ny tohankevitra hoe nàka tàhaka lahatsoratra iray an'i Stephen Schlesinger, ilay minisitra, “hevitra tsy mifanaraka mihitsy amin'ny etika” avy aminà boky marobe tsy nasiana fitanisàna ny loharano nakàna azy, nataony dika-petaka avy any amin'ny Wikipedia, ary na ireo fanitsiana nataony aza dia tsy mifanandrify amin'ny tokony ho izy no sady mbola be diso koa.
Tamin'ny Febroary, ny tranonkala mpanamarina vaovao Faktograf dia nanoritra fa nanao fanitsiana no sady niala tsiny tamin'i Schlesinger i Barišić taorian'ny nahitàna fa nanao hàla tàhaka izy, ary ireo fanazavàny ny tranga iray manontolo dia mamitaka sy mandrokiroky avokoa
Nahazo sonia efa maherin'ny 11.639, hatreto, ny fanangonantsonia anaty aterineto “Atsaharo ny Hàlatàhaka Eto Kroasia”, natombok'ireo 19 manampahaizana avy ao Kroasia, isan'izany ireo sasany miasa any Etazonia, UK ary Aostralia.
Feno porofo mivaingana mampiseho fa olana mihanaka be ao amin'ny anjerimanontolo, any amin'ny fiainana ara-panabeazana sy ny asam-panjakàna Kroaty ny fanaovana hàla tàhaka. Ny fanaovana hàlatàhaka sy ireo kazarana fitondrantena mitovy aminy izay tsy azo ekena araka ny etika dia namela fahavoazana ho an'ireo toeram-pikarohana sy fanabeazana; lasa lavidavitra kokoa amin'ny fihenana be amin'ny fitokisana.
Tianay ny haneho ny ahiahy lalina anananay momba ity toedraharaha ity sy hangataka amin'ny Governemanta Kroaty ary ny Parlemantera mba hampihatra politika iray tsy misy fandeferana ny resaka hàlatàhaka. Manokana amin'izany, angatahanay ny hanafaizana ireo hàlatàhaka nataon'ireo mitàna asam-bahoaka.
Ny Faktograf dia nitanisa manampahaizana iray amin'ny resaka lalàm-panorenana, Sanja Barić, izay nanamarika fa tsy tokony hanao fanambaràna manohitra izany ny praiminisitra na minia tsy mahafantatra tsotra izao ny fanapahankevitry ny CESHE. Kanefa, ilay olona efa maloto, Barišić, mbola manohy mitazona ny toeran'ny Minisitra Kroaty misahana ny Siansa sy ny Fanabeazana ihany.
Tato anatin'ny volana vitsivitsy, ireo bitsika ofisialy nalefan'ny governemanta Kroaty momba ny siansa sy ny fanabeazana dia mazàna no mahazo fanehoankevitra avy amin'ireo olompirenena izay mametraka fanontaniana momba ny fahatokisana azy ireo.
Bitsika Lohany: ‘Praiminisitra [ny] Repoblikan'i Kroasia: Famantarana henjana ho an'ny fanohanana ny governemanta io, ikendrena ny fanabeazana sy ny hahazoana STEM, traikefa fototra ho an'ny tanora.’
Bitsika: Teny telo monja avy amiko ho anao — hàlatàhaka, Barišić, Đikić.
Ny 12 May, navoakan'ny Faktograf ny fandàvana iray navoakan'ny mpisolovava an'ilay minisitra, nilazany fa diso ny fanombànana nataon-dry zareo, ary tsy mpaka tàhaka ny olona arovany. Avy eo ny Faktograf nanamarina ny tena izy tamin'ireo filazàna tao anatin'ilay fandàvana, ary nanamafy fa tsy nafototra tamin'ny tena zavamisy izy ireny.
Tao anaty hetsika iray tamin'ny 15 May natao ho an'ny daholobe, namerina indray ireo fangatahany ry zareo loharano niaingàn'ilay fanangonantsonia ety anaty aterineto, momba ny hanesorana ireo voamarina fa mpanao hàlatàhaka ao anatin'ny parlemanta, ny fitsaràna momba ny lalàm-panorenana ary ny governemanta. Nolazain'i Profesora Đikić fa toy ny homamiadana ao anatin'ny fiarahamonina ny fiparitahan'ny hàlatàhaka — ary endrika halatra — izay tsy tokony holeferina na aiza na aiza.
Na izany aza, ny fitanisàna ilay tranga ho toy ny ohatra amin'ireo ezaka tsy nahomby natao hanindriana azy rehefa miady hevitra momba ny fiovàna mety atao ao amin'ny kabinetrany aorian'ireo fifidianana misy ao an-toerana amin'izao fotoana izao, kely dia kely ny vintana hoe hanaisotra an'i Barišić tsy ho minisitry ny siansa ny praiminisitra.